Our DID number providesaservice that providesablock of telephone numbers for calling intoacompany's PBX (Private Branch Exchange) system. Our DID services offers individual phone numbers for your workstation within the company without requiringaphysical line into PBX for each possible connections.
Establishalocal presence for any state without openinganew subsidiary. Engage with local distributors or partners and enableabetter communication while promotingastrong brand image.
ကျွန်ုပ်တို့၏ DID နံပါတ် ဝန်ဆောင်မှု သည် လူကြီးမင်းတို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော PABX (PBX) System မှ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုချင်းစီကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူနေရခြင်းအား အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့၏ ဌာနအသီးသီးရှိ သီးခြားဖုန်းနံပါတ်များ တစ်ခုချင်းစီကို အားလုံး ပေါင်းကာ နောက်ထပ် လိုင်းအသစ် ထပ်မံ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ DID နံပါတ်ကို သုံးကာ ဆက်သွယ် ခေါ်ယူနိုင်ပါပြီ။
DID နံပါတ် ဆိုတာ ထက် ပိုမို တိကျသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင် တန်ခိုးရှင် နံပါတ် (Virtual Number) လို့ပြေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ PABX (PBX) စနစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုပါလျှင် DID ဝန်ဆောင်မှုသည် ငွေကြေးသက်သာသောကြားခံ အော်ပရေတာ တစ်ခု၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူက လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီအား ဖုန်းခေါ်ဆိုနေသည် ဟု မခံစားရဘဲ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီ ရှိ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးနှင့် စကားပြောဆိုနေသည်ဟု ခံစားရနိုင် ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်း ရှိ မည်သည့် အရပ်ဒေသတွင် မဆို တည်ရှိနေသော လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခွဲများ အတွက် နောက်ထပ် ဖုန်းလိုင်းအသစ်များ ထပ်မံ ဝယ်ယူ တပ်ဆင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ DID နံပါတ် တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
သို့ အတွက်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ များပြားလှစွာသော ရုံးဖုန်းနံပါတ်များအား မှတ်သား ထားရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ DID နံပါတ် တစ်ခုထဲဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဖက် အခြား ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားဖက်များ နှင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်ကာလူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ယခုပဲ မြှင့်တင်နိုင်ပါပြီ။
ကနဦးတပ်ဆင်ခ ပေးရန် မလိုအပ်ခြင်း
လူကြီးမင်းတို့၏ VoIP ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းနံပါတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
မြန်မာပြည်တွင်း နေရာ အနှံ့ ကွန်ယက် ဖြန့်ကျက်နိုင်ခြင်း
VIP နံပါတ်များ ရရှိနိုင်ခြင်း
နောက်တိုး လိုင်းအသစ်များ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း